Amadoda afana nezingane ezincane, afana nokuthola izipho futhi akholelwa ngasese ku-Santa Claus. Ukujabulisa kuphela umuntu onesipho kuhlale kunzima. Amadoda ngokuvamile awafuni ukukhuluma, ngakho-ke afuna ukuthola isipho, ngokusobala ahlale engabaza okuphakade mayelana nokukhetha. Futhi kaningi ukuphika "lutho" olulula, nakuba incazelo yalesi sigama ihlale ihlanganiswe emfihlakalo kanye nokulindela ngamehlo avuthayo.
Ukuze unike indoda isipho, okokuqala, kudingeka uqonde ngokucacile uhlobo lobuhlobo obunalo nomuntu ozokwenza isipho. Ngempela, kunempela umehluko phakathi komuntu-boss, indoda-lover, umngane-umuntu noma osebenza nabo kanye nomkhulu-ugogo. Ngaphezu kwalokho, kunamaholide okwanele nemikhosi ekhalendeni lethu, lihlala kuphela kwi-stock up imibono bese uphakamisa fantasy yakho. Uma unezinamba ezinkulu zamadoda endaweni yakho, khona-ke ungancoma ukuthi udale inothi lapho ungabhalela khona wonke amalanga okuzalwa wamadoda, izintandokazi zabo nezifiso zabo, ezivezwe ngengozi ezingxoxweni. Ngakho-ke, uma bethola isipho njengesipho abaphuphile isikhathi eside, kodwa abakwazanga ukuthenga ngenxa yokuntuleka kwesikhathi noma izimali, isipho ozosinika sizohlala enkumbulweni yakho isikhathi eside.
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi akunakwenzeka njalo ukuthola ukuthi isiphi isipho esifiselekayo, ngezinye izikhathi abazi ukuthi yini abayifunayo, noma izifiso zabo zishintsha ngokulandelana futhi azikwazi ukuyeka ngesipho esithile ngesikhathi. Ngokuvamile, amadoda akhetha ukusebenza, hhayi izinto ezinhle. Yini abantu abathanda ukuyithola njengesipho? Kwabesilisa, abashayeli bahlale benesithakazelo ekutholeni izesekeli zemoto njengamanje, ukukhetha kule ndawo kukhulu kakhulu. Uma ukubhema, ama-ashtrays angabonakali kanye nama-lightweight stylish, chess ezenziwe ngezandla, ubaba womndeni isethi yama-screwdrivers, ngendlela, abazange bavinjelwe yinoma yimuphi wala madoda, noma ngabe baqubuzela kule ndawo.
Kubalulekile ukusho ukuthi yini engavunyelwe ukunikeza amadoda. Izibhedlele, amathawula, amasokisi, izingubo zangaphansi, nazo zigwema izipho zezimonyo namafutha, ozakwabo nabangane. Ukunakekelwa kufanele kuthathwe emithonjeni namabhande - ngoba ukuthanda izinto kuyahlukahluka.
Uma ukukhetha kwesipho kungenye yezikhathi ezibalulekile eholidini lomuntu, bese uletha lesi sipho yingxenye ebaluleke kakhulu yomcimbi. Phela, isipho sokuqala sesipho sizokhunjulwa ngaphezu kwesipho ngokwayo. Amadoda amaningi, kanye nabesifazane, njengendlela engeyona ejwayelekile yalesi sinqumo. Umphathi ehhovisi akudingeki enze ukuhalalisela amahlaya, mhlawumbe akulungile ukuthola amakhasimende azungezwe amabhaluni. Futhi ngomuntu oseduze, indlela enjalo "yomoya" iyoba usizo kakhulu. Umngane wami wangitshela ukuthi wayenezidlo ezisemthethweni ekudleni kwakhe ngosuku lokuzalwa kwakhe, konke kwahamba njengokulindelwe, kodwa esikhundleni sesibhilidi wathola isipho nesiqephu sekhekhe namakhandlela. Lesi sipho sanikezwa yibo bonke abasebenzi be-restaurant, kuhlanganise nabapheki, kanye nezivakashi kwamanye amatafula athokoza kakhulu. Futhi inkontileka isayinwe ngempumelelo. Ukwehluleka okunjalo okuvela kwabalingani bakhe wakhumbula impilo.
Uma ukuzilibazisa okuyinhloko empilweni yakhe nguwe. Lokho, kuyadingeka ukuthola umsebenzi, uma izimali zivumela futhi zidansa into ethile engavamile-yomdanso wesisu noma izakhi ze-striptease. Into esemqoka ngesikhathi esisodwa khumbula ngezesekeli - zangaphansi zangaphansi, umculo nombhede omkhulu. Lena umcimbi onenhlanhla - futhi kuye isipho nami ngokwami. Faka ama-rose petals ekamelweni lokulala, ukhanyise amakhandlela bese uvala ukukhanya ...
Kungakhathaliseki ukuthi uyiphi isipho kumuntu, kungakhathaliseki ukuthi wanikezwa, into esemqoka ukuthi kule sipho indoda kufanele izwe ingxenye yomphefumulo wakho nothando.
Uma umuntu ecela njalo imali
Imikhuba emibi kunazo zonke yabantu
Ukuthonya kwesithombe sikababa ebuhlotsheni nomlingani
Yini umuntu ayifunayo kowesifazane
Indlela yokucela ngokufanele usizo kumfana?
Amakhukhi "Ama-coconut shingles"
Izikhwama eziphezulu zezintambo zezingubo
Isobho se-Cheese ne-pepper eqoshiwe
I-Biography kaHeath Ledger
Lapho izingane zingaqala ukunikeza ingulube
Izizathu zokuhlukanisa nomuntu wakho othandekayo
I-sauce yesiFulentshi (i-vinaigrette)
Izikhwehlela, i-migraine ne-neuralgia
Umlobokazi odlala futhi olula: senza izinwele zekhanda ngemishado
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Taurus
Ukuzivocavoca kwenziwa ngezintambo
Ngokuba isitayela sezwe: iqoqo lezinhlobonhlobo ze-Olivia Palermo ye-Baublebar